नाफा – Himalaya Television
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कुमारी बैंकद्वारा झण्डै दुई अर्ब नाफा आर्जन
१२ वैशाख २०७८ काठमाडौं । कुमारी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकले १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जुन...
नेपाल टेलिकमको नाफामा आयो ठुलो गिरावट
३० माघ २०७७ काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपाल टेलिकमको नाफामा ठुलो गिरावट आएको छ । गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा टेलिकमको खुद नाफा ४ अर्ब ९३ करोड रहेकोमा यो वर्ष सोही अवधिमा करिव ३ अर्ब...
कुमारी बैंकद्वारा दोस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब २८ करोड नाफा आर्जन
१२ माघ २०७७ काठमाडौं । कुमारी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो पोहोरको तुलनामा ५१ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात ४१ करोड रुपैयाँ धेरै हो । गत आर्थिक...
आयल निगमको खुद नाफा रु १२ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख
२० पुस २०७७ काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा खुद नाफा रु १२ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख गरेको जनाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको ३९ औंँ वार्षिक साधारणसभामा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं उद्योग,...
किसानको भेषमा धान बेचेर नाफा उठाउँदै व्यापारी (भिडियोसहित)
२६ मंसिर, २०७७ पर्सा । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको वीरगञ्जस्थित कार्यालयले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिरहेको छ । मंसिर ११ गतेदेखि कम्पनीले सोना मन्सुली धान प्रति क्वीन्टल २ हजार ८ सय ८५ र जिरा मसिनो...
सनराइज बैंकले गत वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने
८ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । सनराइज बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई ८ दशमलव २८ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयरधनीलाई ५ दशमलव ८ प्रतिशत बोनस शेयर र करसहित २ दशमलव ४८ प्रतिशत नगद...
नेपाल बैंकको खुद नाफा सामान्य घट्यो
१५ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ५५ करोड ४ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो पोहोरको तुलनामा ५ दशमलव ४० प्रतिशत कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो...
बोयर जातका खसीबाख्रा पालन, धेरै तौल अनि धेरै नाफा ! (भिडियोसहित)
४ असोज, २०७७, दाङ । बोयर जातका खसीबाख्रा पालनमा दाङका किसानको आकर्षण बढदै गएको छ । स्थानीय जातका भन्दा बोयर जातको खसी बाख्राको तौल धेरै हुने र धेरै नाफा हुने भएकाले किसानको आकर्षण बढेको हो । विदेशमा १२ वर्ष...
गत वर्ष कुन बैंकले कति कमाए नाफा ? (भिडियोसहित)
१ भदौ, २०७७, काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीको असर वाणिज्य बैंकहरुको नाफामा समेत परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २७ वाणिज्य बैंकले कुल ५४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे ७...
नेपाल बैंकद्वारा गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५५ करोड खुद नाफा आर्जन
२५ साउन, २०७७ काठमाडौं । सरकारकी स्वामित्वको नेपाल बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ दशमलव ५५ प्रतिशत कम हो । ७४–७५ मा नेपाल बैंकले २ अर्ब...